Japan ayaa ku dhawaaqday Xaaladda Degdegga ah ee COVID-19 siddeed degmo oo kale
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Japan ayaa ku dhawaaqday Xaaladda Degdegga ah ee COVID-19 siddeed degmo oo kale
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Jaban ee Japan • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Sports • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Japan ayaa ku dhawaaqday Xaaladda Degdegga ah ee COVID-19 8 degmo oo dheeraad ah
Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama iyo Hiroshima ayaa si rasmi ah hoos imaan doona Xaaladda Degdega ah laga bilaabo Jimcahaan ilaa 12ka Sebtember.
Japan waxay ballaarineysaa Xaaladda Degdegga ah ee coronavirus.
Ballaarinta Xaaladda Degdegga ah ayaa imaanaysa iyadoo Tokyo ay martigelineyso Ciyaaraha Olombikada.
Isbitaalada ku yaal Japan oo dhan ayaa la halgamaya qalliinka COVID-19.
Sida laga soo xigtay ilo-wareedyada dawladda Japan, Japan waxay ku dari doontaa siddeed degmo oo kale Xaaladda Degdegga ah ee COVID-19 oo hadda daboolaysa Tokyo iyo 12 aag oo kale, si ay isugu daydo inay joojiso tsunami-ga waddanka ee cudurka coronavirus.
Raiisel wasaaraha Japan Yoshihide Suga ayaa la kulmay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka caafimaadka Norihisa Tamura iyo Yasutoshi Nishimura, oo ah wasiirka masuulka ka ah jawaabta COVID-19, si ay uga wada hadlaan tallaabada, iyadoo go'aanka si rasmi ah looga dhigi doono kulanka guddiga .
Marka la eego Xaaladda Degdegga ah, makhaayadaha waxaa laga codsanayaa inaysan u adeegin aalkolo ama aysan bixin karaoke, waxaana la faray inay xiraan 8 -da fiidnimo. Xarumaha waaweyn ee ganacsiga oo ay ku jiraan dukaamada waaxyaha iyo suuqyada wax laga iibsado ayaa laga codsanayaa inay xaddidaan tirada macaamiisha loo oggol yahay inay isku mar soo galaan.
Suga ayaa sidoo kale ugu baaqday dadweynaha inay yareeyaan dibad -baxyada meelaha dadku ku badan yahay 50%, iyo in shirkaduhu ay shaqaaluhu ka shaqeeyaan guriga oo ay yareeyaan tirada rakaabka 70%.
Ballaarinta xaaladda degdegga ah - oo hadda jirta Tokyo iyo sidoo kale Ibaraki, Tochigi, Gunma, Chiba, Saitama, Kanagawa, Shizuoka, Kyoto, Osaka, Hyogo, Fukuoka iyo Okinawa - waxay imaanaysaa iyadoo caasimaddu martigelineyso Paralympics -ka, oo la qaban doono ku dhawaad ​​gebi ahaanba iyada oo aan daawadayaal laga helin, laga bilaabo Talaadada.
Dowladda ayaa sidoo kale lagu wadaa inay ballaariso xaaladda deg-degga ah ee daboolaysa 16 degmo ilaa afar kale-Kochi, Saga, Nagasaki iyo Miyazaki-ilo-wareedyadu waxay sheegeen, tallaabo u oggolaanaysa guddoomiyeyaasha inay xayiraad ganacsi ku soo rogaan aagag cayiman halkii ay ka ahaan lahaayeen gebi ahaanba degmooyinka.
Isbitaallada ku yaal inta badan Japan ayaa la halgamaya inta ay sii kordhayaan kiisaska COVID-19, iyada oo sariir yari ay ku qasbeyso qaar badan oo leh astaamo khafiif ah si ay ula qabsadaan guriga.
Toddobaadkii hore, Ururka Gudoomiyaasha Qaranka wuxuu ugu baaqay dowladda inay ku soo rogto xaalad degdeg ah ama xaalad deg-deg ah oo dalka oo dhan ah si loo xakameeyo faafitaanka cudurrada.